သက်တန့်ချို: ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းသော ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဘာလဲ ဘယ်လဲ
အစကတော့သူတို့ကို သနားနေတာ။ အခုလိုသူတို့က ပြန်ပြီးအကြမ်းဖက်နေတာကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးထင်တယ်၊ စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးကြီးခံစားနေရတယ်၊
htike June 9, 2012 at 12:35 PM
မွန်မွန်ယိုကို June 9, 2012 at 1:13 PM
အမေစု ပြောပြောနေတဲ. တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အစိုးရတစ်ရပ်အနေနဲ. တိတိကျကျလုပ်ဆောင်မယ် ဆုိုရင် နုိုင်ငံသားတွေကို စိစစ်ပီး ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာ.မြေ မှာ ထပ်ပီးမရှိစေဖုို. မျှော်.လင်မိပါတယ်။
ကိုသက်တန်.ချိုရေးထားတဲ. သဘောတရားတွေကို လက်ခံသဘောတူပါတယ်။ နုိုင်ငံသားတုိုင်းဒီလို ချင်.ချင်.ချိန်ချိန်နဲ.တွေးတောစဉ်းစားနုိုင်ကြပါစေရှင်။
win htut October 30, 2012 at 3:32 AM
အ မေ စု အ မေ စုနဲ့ဘာ များ လုပ် ပေး နိုင် လို့လဲ
Tin Ko Ko June 9, 2012 at 1:58 PM
thu June 9, 2012 at 2:30 PM
အကြမ်းဖက်လိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့လူမှန်သမျှအမိမြေကနေမောင်းထုတ်ပစ်ရမယ်။ဒါမှတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းနိူင်မယ်။ဒီလိုဖြစ်လာနိူင်တာကိုသိရက်နဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်မှု နည်းနည်းမှမရှိခဲ့လို့ဒီလိုပိုဆိုးကုန်တာပဲ။ ဒီဖြစ်ရပ်တွေဟာတာဝန်ယူခေါင်းခံပြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်ယူထားကြတဲ့အကြီးအ ကဲတွေအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်။ဖြစ်လာမှယုန်တောင်ပြေးခွေး မြောက်လိုက်လုပ်နေရင်တော့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ နစ်နာကြဦးမှာအမှန်ပဲ။ ကိုယ့်လူမျိုးထိတော့လည်းရင်နာရတယ်။
ရက္ခိတ ဆိုတဲ့ ရခိုင်များဟာ အမျိုးကိုစောင့်ထိန်းသူတွေပါ။သူတို့ကို ရိုဟင်ဂျာတွေကပစ်မှတ်ဖြစ်လာတာကတော့ စည်းရုံး၊လှုံ့ဆော်၊သိမ်းသွင်း၊စ မ့်ဝင်လို့မရလို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ရမှာပါ ဒါကလည်း သမိုင်းပေးတာဝန်တရပ်ပါ၊စီးပွားရေးအရ နေစေခဲ့တာ ပြန်လည်စော်ကားဖို့မဟုတ်ကြောင်း ရိုဟင်ဂျာတွေသိစေချင်ပါတယ်။
ကျုပ်ကတော့ ဗမာဖြစ်ပေမယ့် အမျိုးကိုထိတော့မချိအောင်နာသဗျာ
ရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာမြေပေါ်မှ နှင်ထုတ်ပါ..
နှင်း June 9, 2012 at 4:25 PM
ကုလား နဲ့ ငါး ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရင်ဆုံး မျိုးသုန်းပျောက်ကွယ်မှာ ဖြစ်တယ်...@Anonymous
ကုလား နဲ့ ငါး ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရင်ဆုံး မျိုးသုန်းပျောက်ကွယ်မှာ ဖြစ်တယ်..
နှင်း June 9, 2012 at 4:27 PM
တန`င်္လာကိုကို June 9, 2012 at 4:39 PM
အလွမ်းမြို့ June 9, 2012 at 4:52 PM
ရိုဟင်ဂျာလို့ မခေါ်ကြပါနဲ့။ သူတို့နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်သလိုဖြစ်နေတယ်.
minthu June 9, 2012 at 4:57 PM
Moe June 9, 2012 at 6:31 PM
Tin Ko Ko ရေ....
ညိမ်ခံမနေလို့ မင်းအမေတွေ မင်းအမတွေကို ကုလားနဲ့ပေးအိပ်မလို့လားကွ။
ကုလားကို ဘုရားလိုကိုးကွယ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်က အခုတော့ ဘာတတ်နိုင်သေးတုန်း။ မင်းတို့အမေ နှမတွေကိုလဲခြံခတ်ထားအုံးဟေ့။ တော်ုကာ ကုလားစာတွေဖြစ်ကုန်အုးမယ်။ ဘုရားကျွေးလို့ ထမင်းဝနေတာလား ကုလားကျွေးလို့ထမင်းဝနေတာလား စဥးစားပါအုံး။
ချစ်ကိုကို June 9, 2012 at 11:00 PM
ကျုပ်တို့တတွေ သတိထားရတော့မယ့် အရေးကြီးနေရာတွေကိုအလစ်သုတ်
pheasant June 9, 2012 at 11:09 PM
လိုအပ်လာရင် ရခိုင်ညီကိုတွေကို ကူညီပြီး ဒီဘင်ဂလီတွေကို မောငးထုတ်ရလိမ့်မယ် စစ်ကြေငြာသင့်ရင် ကြေငြာရမယ် မြန်မာဆိုတာဘာလဲ ဗမာဆိုတာဘာလဲ ပြရမယ်
Anonymous June 9, 2012 at 11:37 PM
မှတ်မိသေးတယ်။ “ကေ”ဆိုတဲ.ဘလော.ဂါရေးထားတာ ရိုဟင်ဂျာတွေဖက်ကနေ လူသားချင်းစာနာသလိုလိုနဲ.ရေးထားတာ။
အခုလဲ သွားစာနာလိုက်ပါဦးလား၊ စာနာကောင်းလို. မြန်မာပြည်တပြည်လုံး ကုလားပြည်ဖြစ်သွားလိမ်.မယ်
ရိုဟင်ဂျာတွေကိုဘဲအပြစ်ပြောနေကြတာ ဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ ရခိုင်ဗမာတွေအကြောင်းတွေကိုရောအတွင်းကျကျသိကြရဲ့လား။ အတွင်းကျကျမသိကြဘဲ ရန်းမပြောစေချင်ပါဘူး။ ရိုဟင်ဂျာတွေက ဟိုး...အရင်တုန်းကတည်းက ရခိုင်ဗမာတွေရဲ့ ဖိနိပ်ချုပ်ချယ်ချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို လေ့လာသင့်တယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဘယ်လောက်ထိအဖိနိပ့်ခံရလဲဆိုတော့ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်ချင်ရင်တောင် သူတို့စီက ခွင့်တောင်းရှောက်လွာတင်ပြီး၊ရှောက်လွာကြလာမှ လက်ထပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာ တကယ်ဆို လုတ်သင့်လား။ စဉ်းစာုးကပါအုံး။ အခုဖြစ်စဉ်မှာလဲ အတွင်းကျကျ သိဘို့လိုအပ်ပါတယ်။ လုတ်ုကံခံရတာမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် သင်ဘယ်လို ခံစားရမလဲ။သင်ဘယ်လို တုန့်ပြန်မလဲ။ (ကိုကိုကီး)
ငါးကမျိုးပြုတ်ချင်ပြုတ်သွားမယ်။ကုလားကတော့ ဒင်းတို့ထင်သလို ဘယ်တော့မှ မျိုးပြုတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ မှတ်.... ကုလားလေး
ချစ်စံအိမ် June 10, 2012 at 8:48 AM
ဆရာရဲ့ အမြင်များနဲ့ ကွန်မန့် လေးတွေပါ ဖတ်ခဲ့ပါကြောင်း..
ကျွန်တော်လိုချင်တာကတော့ ရိုဟင်ဂျာတွေ မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ တစ်ယောက်မှမရှိတာကို လိုချင်တာကိုဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ပြောပါရစေ ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သူတို့ဟာ အငြိုးအတေးကြီးတယ် ဆိုတာ အခုတတိယဖြစ်ရပ်က သက်သေပြခဲ့တယ် ။ အစိုးရက အခြေအနေတည်ငြိမ်အောင်ထိမ်းသိမ်းလိုက်ပါပြီ အားလုံးတည်ငြိမ်သွားပြီ ရိုဟင်ဂျာတွေကတော့ လက်နက်ချလိုက်ပါပြီ စတဲ့သတင်းထွက်လာရင်တော့ စိုးရိမ်စရာတစ်ခုလို့ ကျွန်တော်မြင်မိတယ် ။ အားလုံးတည်ငြိမ်သွားတဲ့အချိန် အငြိုးအတေးကြီးစွာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို လှို့ဝှက်စွာ သတ်ဖြတ်ပြီး ရန်ငြိုးမချေကြဘူးလို့ ဘယ်သူကများ အာမခံနိုင်ပါသလဲ ။ ဒါကြောင့် ရိုဟင်ဂျာတွေ မြန်မာမြေကနေ အမြန်ဆုံးထွက်ခွာသွားကြဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ ။ အစိုးရကိုလည်း ဥပဒေတစ်ခု သတ်မှတ်ပြီး မြန်မာ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုစီစစ်စေချင်ပါတယ် ။
ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ စကားလုံး မြန်မာတွေဆီဘယ်အချိန်ကစရောက်လာတာလဲ၊ ဘယ်သူတွေလက်ခံခဲ့တာလဲ။ ဒီစကားလုံးကိုတောင် တချိန်က ညင်းခဲ့ကြသေးတယ်လေ။ ဘယ်သူတွေတာဝန်အရှိဆုံးလဲ စီစစ်ကြည့်ကြပါ။
nandalayan June 10, 2012 at 10:08 PM
ဟေ့ ကုလားဆို ဘယ်ကုလားမှ လူကောင်းမရှိဘူး
ချစ်ကို June 11, 2012 at 12:00 AM
ရဲစခန်းကို ဘင်ဂါလီတွေ ဝင်စီးလိုက်ပြီလို့ မိုးမခ ပြောတယ်။လုံခြုံရေးပေါ့လို့မရဘူး။
ကေ http://www.kthwe.blogspot.com/ ကို သွားရှာတာဘဲ ဘင်္ဂလီ ပို့ အကြောင်း မတွေ့ ဘူး
ရခိုင်ဆိုတာ တိုင်းရင်းသား ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တိုင်းပြည်ထဲ ခိုးဝင်လာတဲ့ဘင်္ဂလီ ကိုယ့်သွေးကိုယ့်သား ထိပါးနေတာ တိုင်းရင်းသားတွေ စည်းလုံးကြပါ
ဘင်္ဂလီ မွတ်ဆလင်တွေကို မြေပေါ်က ထုတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်
ပြည်ပက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ အတွက် ကူညီဖို့ ပြင်ကြပါ
Co2zenith: Islamization ဆိုတာဘာလဲ ? (WARNING)
ဒီပို့ စ်ကို မျှဝေတင်ပို့ သူ Co2zenith အကြောင်းအရာ ဖြစ်သင့်လား
ကျွန်နော် ဒီစာကို အားနာတတ်လို့ မကောင်းတတ်လို့ သိမ်းထားမိတာ
ဒီလင့်က တရိစ္ဆာန်တွေ ကြောင့်ပါ၊၊
ဒီမေးလ်ကို ပြန်ပီးသတိပေးခဲ့ တဲ့ အကိုကြီး အဓိပတိဘွား စနေသား ရယ်၊၊
လက်တစ်ဖက်နဲ့ စာရိုက်တာ အခက်ခဲရှိနေဒဲ့ ကျွန်နော့ကို ဒီပိုစ်ဖြစ်မြောက်အောင် မအားတဲ့ကြားက ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးခဲ့တဲ့ အကို ညီ ညီမ အမများ နဲ့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကူညီပေးချင်ရက်နဲ့ အခွင့်မကြုံခဲ့ရဒဲ့ သူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတရ်ခင်ဗျ၊၊
လူမျိုးအသီးသီးဘာသာအသီးသီးမှအပြစ်မဲ့ညီအကိုမောင်နှမများ မွတ်ဆလင်တို့ ရဲ့
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက မွတ်ဆလင်တွေကို သတ်ပစ်ရမယ် လို့ ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော်တို့အားလုံး မိမိနိုင်ငံ ၊မိမိလူမျိူးမိမိဘာသာတရားတွေကို Islamization
တစ်ချိန်ကျရင်ဘာမှလုပ်လို့ မရတော့ပဲ ထိုင်ကြည့်ပြီးငိုနေရတဲ့
ကျွန်တော်တို့ အတွက်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့သားမြေးတွေလက်ထက်ကျရင်
ခံရ မှာ။ ဒါကြောင့်ပြောနေတာ။
ကျွန်တော်တို့ လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးရဲ့အဓိကရန်သူဟာ islam အယူဝါဒဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ Islamization ရဲ့ကြောက်
အစာစားနေတဲ့သိုးအုပ်တစ်အုပ်ကို မြေခွေးကြီးက စားဖို့ချောင်းနေပါတယ်။
တခြားအရပ်က သိုးအုပ်ကလေးတွေကို လည်းဒီလိုပဲ
ဒီတော့ကျွန်တော်က အဲဒီ သိုးအုပ်ကလေးကိုမြွေခွေးကြီးလာနေတဲ့အကြောင်း။
တချို့ သိုးက မယုံတာ ။
ကျွန်တော့်တာဝန်ကတော့ …….ဒါတွေဒီလိုရှိကြောင်း ။
မကြာမီ ဒီသိုးအုပ်ကိုလည်းဝါးမျိုတော့မှာဖြစ်ကြောင်း သတိပေးပြီးပါပြီ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဘယ်ဘာသာတရားမှ လူသတ်တာကိုအားမပေးပါဘူး၊။လူ့ အသက်ကိုသတ်တာဟာ
ကြီးမားတဲ့ အပြစ် Sin အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
လူ့ အသက်ကိုသတ်တဲ့သူဟာ ငရဲဘုံကိုလားရတယ်လို့ဆုံးမထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အစ္စလာမ်ဘာသာကတော့ အစ္စလာမ်အယူဝါဒပြန့်ပွားရေးအတွက်
ထိုသို့အစ္စလာမ်မဟုတ်တဲ့တွေရဲ့အသက်ကိုသတ်မှသာလျှင်ကုသိုလ်ရ
ပြီးကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်တယ်လို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။
မွတ်ဆလင်တွေဟာသူတို့ ဘုရား Allah နဲ့ Mohammed ကိုသူတို့အသက်ထက်ပို ချစ်ရပါတယ်။
မွတ်ဆလင်တွေအတွက် ကိုရမ်ကျမ်းဟာ အသက်ပါပဲ။ 100%
အစ္စလာမ်ဘာသာထဲမ၀င်ရင်သတ်ကိုသတ်ပစ်ရမယ်လို့သူတို့ဘုရားAllah (အာလာ)
ဒါဟာ Duties of Muslims မွတ်ဆလင်တွေမဖြစ်မနေထမ်းဆောင်ရမဲ့တာဝန်တွေပါပဲ။
(လူသတ်ခိုင်းတဲ့ကျမ်းချက်ပေါင်း ၁၂၃ချက် တောင်ရှိပါတယ်။
ဒီတော့….ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ မွတ်ဆလင်မှန်ရင် ကိုရမ်ကျမ်း
မွတ်ဆလင်တစ်ယောက်ကကိုရမ်ကျမ်းကို ဖတ်ရင် အာလာဘုရား
အမိန့်တော်တွေပဲဆိုပြီး ၁၀၀% ယုံကြည်မယ်။
ဒီတော့သူဘာလုပ်မလဲ။ ကောင်ကင်ဘုံရောက်အောင် အစွန်း ကုန်ကြိုးစားပြီးလူသတ်တော့မှာပေါ့။
တောင်ရှိပါတယ်။ အချို့ ကိုဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Did you know that there are 123 verses in the Quran concerning fighting and
killing for the cause of Allah? Here are butafew passages:
-Muslims are encouraged to be wholly occupied (Sura 2:273) with fighting for
Allah will give “a far richer recompense to those who fight for him” (Sura
Regarding infidels (unbelievers), they are the Muslim’s “inveterate
enemies” (Sura 4:101).
Muslims are to “arrest them, besiege them and lie in ambush everywhere”
(Sura 9:5) for them.
They are to “seize them and put them to death wherever you find them, kill
them wherever you find them, seek out the enemies of Islam relentlessly”
He is to be told, “the heat of war is fierce, but more fierce is the heat
of Hell-fire” (Sura 9:81).
- A Muslim must “fight for the cause of Allah with the devotion due to him”
- Muslims must make war on the infidels (unbelievers) who live around them
- Muslims are to be “ruthless to unbelievers” (Sura 48:29).
- A Muslim should “enjoy the good things” he has gained by fighting (Sura
- A Muslim can kill any person he wishes if it bea“just cause” (Sura
- Allah loves those who “fight for his cause” (Sura 61:3).
Anyone who fights against Allah or renounces Islam in favor of another
religion shall be “put to death or crucified or have their hands and feet
cut off alternative sides” (Sura 5:34).
Slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and
besiege them and lie in wait for them in everyambush. (Koran 9:5)
” I will instill terror into the hearts of Unbelievers ( non-islam) smite ye
above their necks and smite all their finger-tips off them” Qur’an 8:9-13
- I will instill terror into the hearts of the unbelievers, Smite ye above
their necks and smite all their finger tips of them. (Koran8:12)
- They should be murdered or crucified or their hands and their feet should
be cut off on opposite sides. (Koran 5:33)
Buddhism မှာ Buddha ဟာ လူ့ အသက်ကို မသတ်ဖို့ အတိအကျပညတ်ထားပါတယ်။
Judaism မှာလည်း လူ့ အသက်ကို မသတ်ဖို့ ဘုရားသခင်ကအတိအကျပညတ်ထားပါတယ်။
Christianity မှာလည်းယေရှုခရစ်ဟာ လူ့ အသက်ကို မသတ်ဖို့ အတိအကျပညတ်ထားပါတယ်။
ံHinduism မှာလည်း လူ့ အသက်ကို မသတ်ဖို့ အတိအကျပညတ်ထားပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဘာသာအသီးသီးဟာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုတိုက်ခိုက်ခြင်း ၊
ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်း (၁၄၀၀) ကစပြီး အရမ်းကိုပူလောင်မှားယွင်းနေတဲ့ Islam
ဘာသာကို Mohammed ကထွင်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်ကစလို့ 
ဘာသာအားလုံးဟာတစ်ခု တည်းသောဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့ Islamic Jihads တွေရဲ
မိုဟာမက် တီထွင်ခဲ့တဲ့ ဆော်ဒီကကျောက်တုံး မဲမဲကြီး ကိုကိုးကွယ်တဲ့ Islam ရဲ့
Purpose ကိုရှင်းပြ ပါ့မယ်။
Islam = Submission , ၀န်ခံခြင်းပါပဲ။ အာလာဆိုတဲ့ ကောင်ကြီးကိုပဲတစ်ခုတည်းသော
ဘုရားသခင် အဖြစ်ဝန်ခံကိုးကွယ်ရပါ့မယ်။ Must Do ပါ။
မကိုးကွယ်ရင် ခေါင်းဖြတ်သတ်ပစ်ရပါ့မယ်။ One World , One Religion
ပဲဖြစ်ရပါ့မယ်။ အစ္စလာမ်ဆိုတဲ့ဘာသာတရားတစ်ခုတည်းဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာရှိရပါ့မယ်။
” ISLAMIZATION ” or ” Islam will Dominate the whole world ”
ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအစ္စလာမ်ဆိုတဲ့ဘာသာတရားတစ်ခု ပဲရှိရပါ့မယ် ။
အခြားသောဘာသာတရားအားလုံး ကိုဖျက်ဆီးပစ်ရပါ့မယ် ။
ဒါကြောင့်ဒီမကောင်းဆိုးဝါးAllah ရဲ့ အမိန့်ကြောင့် ဘာသာတရားအားလုံးဟာ
ရာဇ၀င်မှာ နှစ်နိုင်ငံစစ်တိုက်လို့ စစ်ရှုးံ ရင် အဖျက်ဆီးခံ ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့မွတ်ဆလင်တွေ ကိုစစ် ရှံှးု့ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးမှာဆိုရင်
မွတ်ဆလင်တွေဟာ စစ်နိုင်ရင်အဲဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယောကျာင်္းလေးမှန်သမျှကိုခေါင်းဖြတ်သတ်ပြီး
ဥပမာ ။ ။ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံဟာမူလ က ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံး သဲကျောက်နဲ့ထုလုပ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်ကြီးကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း (၁၄၀၀) အတွင်းမွတ်ဆလင်တို့ ရဲ့islamization အလုပ်ခံရတဲ့ ၊
Turkey (တူရကီနိုင်ငံ) မူလက ခရစ်ယာန်နိုင်ငံ
Indonesia (အင်ဒိုနီးရှား) မူလကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ
င်္Afganistan (အာဖဂန်နစ္စတန်) မူလကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ
Parkistan( ပါကစ္စတန်) မူလက ဟိန္ဒူနိုင်ငံ
Bangladesh(ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ) မူလက ဟိန္ဒူနိုင်ငံ စသည်ဖြင့်
ဘာသာတရားအားလုံးရဲ့အထွတ်အမြတ်ထား တဲ့ Holy Places
ခရစ်ယာန်နဲ့ဂျုးဘာသာတို့ရဲ့အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ Jerusalem မြို့ ဟာ မွတ်ဆလင်တို
့ရဲ့ အကြိမ်ကြိမ်မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ရဲ့အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဂါယာဟာလည်း မွတ်ဆလင်တို
ဒီလောက်သူများဘာသာတွေကိုမိုက်ရိုင်းထားပြီးသူတို့ ရဲ့့ ၀က်တန်ဆာကိုကိုးကွယ်တဲ့
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့်ကို အကြောင်းမဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ ကိုမုန်းတီးနေတယ်လို့ပြော
ဒီမွတ်ဆလင်ကောင်တွေအထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ ဆော်ဒီကမက္ကာ Mecca မြို့ကိုမီးရှို
့ဖျက်ဆီးခဲ့ တယ်လို့ ဖတ်ဖူးလား။ ကြားဖူးလား။
ဘယ်ဘာသာဝင်တွေကမှ ဒီမွတ်ဆလင်ကောင်တွေအထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ ဆော်ဒီကမက္ကာ Mecca မြို့
ု့ ကို တိုက်ိုက်ခိုက်မဖျက်ဆီးခဲ့ဘူး။
ဒါဆိုရင် ဒီမွတ်ဆလင်ကောင်တွေက သူတို့ နဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့
အခြားသောဘာသာတရားအသီးသီးရဲ့Holy Places တွေကို ဘာကြောင့် Blind ကြီး
ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအစ္စလာမ်မှတပါးအခြားဘာသာယဉ်ကျေးမှုမရှိရဆိုတဲ့Only Purpose
ဒီနေရာမှာ အခြားသောဘာသာဝင်တွေဟာသူတို့ ကိုမုန်တီးမှုမရှိပါပဲလျက်
ဘာလို့မုန်တီးလဲဆိုတော့ အခြားသောဘာသာဝင်အားလုံးဟာသူ တို့ ဘုရားAllah ရဲ
မွတ်ဆလင်မှာ အစွန်းရောက်မွတ်ဆလင်နဲ(Radical Muslims)့ ၊ အလယ်အလတ်(Moderate
Muslims)မွတ်ဆလင်ဆို ပြီး(၂)မျိုး ရှိပါတယ်
၁။ အစွန်းရောက်မွတ်ဆလင်ကတော့ယနေ့သိတဲ့ အတိုင်းအသေခံဗုံးခွဲ
ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံနေတဲ့ Sacrifice လုပ်နေတဲ့
ဥပမာ၊ ။ပြောရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူတွေကသာမန်လူတွေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ
WHAT IS THE PURPOSE OF RADICAL ISLAMIC MUSLIMS?
ကုသိ်ုလ်များများရပြီး အာလာကြီးရဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာParadise of Allah
အပျိုစင် ၇၂ ယောက်နဲ့ ၂၄နာရီ Non-Stop (ကာမဂုဏ်)ခံစားရမယ်တဲ့။
အဲဒီ အာလာကြီးရဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာ ဆုလဒ်ဖြစ်တဲ့
ကာမစပ်ယှက်ကေမယ့်အပျိုပြန်ဖြစ်သွားရောတဲ့.။ မိုက်တယ်နော်
အဲ…..ဒါပေမဲ့………..စဉ်းစားကြည့်တော့ ဒါဟာကောင်းကင်ဘုံမှမဟုတ်ပဲ ။
ဒါမှမဟုတ် two feel (ံBoth Heterosexual & Homosexual Sodoy Fucking)
လိင်တူလိင်ကွဲ ဆက်ဆံချင်တဲ့မွတ်ဆလင်တွေအတွက်လည်း အာလာကြီးကထူးရှယ်
Allah is Indeed Merciful :) ဒါကတော့အ၇ွယ်မရောက်သေးတဲ့ ၁၂နှစ်အရွယ်ကောင်လေး
“Lo! Allah hath bought from the believers their lives and their wealth
because the Garden (Paradise) will be theirs: they shall fight in the way of
Allah and shall slay and be slain” Qu’ran 9:111/ Verse 9:111 means what it
means. A Muslim who is killed or who kills fulfilling teachings of 9:5, 9:29
and all the other verses of the Quran exhorting murder, rape, terror, and
torture are guaranteed accession to Allah’s paradise.
The Holy Prophet (Mohammed) said: “The believer will be given tremendous
strength in Paradise for sexual intercourse.” It was questioned: “O prophet
of Allah! can he do that?” He said: “He will be given the strength of one
hundred persons.’” (Mishkat al-Masabih 4:42:24; Sunan al-Tirmidhi 2536).
The Islamic paradise is filled with full-breasted, lustrous-eyed virgins who
regenerate as virgins after each sex act. Those Muslims, who gain access
into Allah’s paradise, can sexually enjoy those virgins for all eternity.
About the sensual attractions of Islamic paradise, aka Allah’s whorehouse,
“As for the righteous (Muslims)… We (Allah) shall wed them to beautiful
virgins with lustrous eyes” [Q 44:51-54]
The righteous (Muslims) they shall triumph… Theirs shall be voluptuous
women” [Q 78:31-33]
They shall be attended by boys graced with eternal youth, who will seem like
scattered pearls to the beholders.”
မွတ်ဆလင်တွေသတ်မှတ်ထားသူ Mohammed, the Roll Model of All Muslims.
He is ” An excellent model of conduct ” . Qur’an 33:21.
He demonstrates ” An exalted standard of character” Qur’an 68:4
He(Mohammed ) is the supreme example of behaviour for muslims to follow.
မွတ်ဆလင်အားလုံးရဲ့ စံပြပုဂိုလ်ကတော့မိုဟာမက်ပါ။သူ့ ဟာ
သူဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ????????? ဆိုတာတွေကိုလေ့လာကြည့် ရအောင်။
သူဟာအစက ဂျုးလူမျိုးတွေနဲ့ ခရစ်ယာန်တွေကို သူ့ ကို တမန်တော် အဖြစ်လက်ခံဖို့
မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့စေတမန်ပရောဖက်လာမယ်လို့ ကြိုသိနေတဲ့ ဂျုးလူမျိုးတွေနဲ
့ခရစ်ယာန်တွေ ကသူ့ ကိုငြင်းပယ်လိုက်တော့ ဂျုးလူမျိုးတွေနဲ့ ခရစ်ယာန်တွေကို
အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့နံပါတ်(၁)ရန်သူအဖြစ်တွေ့ ရာသင်းချိုင်း ဓားမဆိုင်းသတ်ရမယ်လို
အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ် မိုဟာမက်ကိုယ်တိုင်လည်း စံပြအဖြစ် Arabia Desert မှာ အစုအဖွဲ့ လေးတွေနဲ့ နေ
တဲ့ဂျူးလူမျိုး ကုန်သည် အစုအဖွဲ့ လေးတွေကိုဝင်တိုက်ပါတယ်။
ဂျူးလူမျိုး ကုန်သည်တွေကခုခံပေမဲ့ မနိုင်နိုင်တော့လက်နက်ချအရှုံး ပေး
ဘဝ အမောတွေ ........... ကြေပါစေတော့ ....
ဒီလိုလက်နက် ချ အရှုံးပေးနေတဲ့ လက်နက်မဲ့လူတွေကို မသတ်ရဘူးဆိုတာ
ဒါပေမဲ့ မိုဟာမက် ကတော့ ဒီလိုလက်နက် ချ အရှုံးပေးနေတဲ့ လက်နက်မဲ့ ဂျုးလူမျိုး
ယောကျာ်း ၆၀၀ မှ ၉၀၀ အတွင်း ကို ရက်ရက်စက်စက်ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို မြင့်မြတ်လှတဲ့ မိုဟာမက်ရဲ့ မြင့်မြတ်လှတဲ့ စောက်ကျင့်စောက်ကြံ
(လက်နက်မဲ့လူကိုခေါင်းဖြတ်သတ်တာ) ကို မွန်မြတ်လှတဲ့စံပြ
ဒါ့အပြင် ဂျူးလူမျိုး ကုန်သည်တွေ ထဲကမိန်းမနဲ့ တွေနဲ့
ကလေးငယ်တွေကိုကျွန်အဖြစ်ရောင်း စားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ကုန်သည်ကြီးပေါ့ဗျာ ။
တဏှာဘီလူးကြီးမိုဟာမက်ကသိတဲ့အတိုင်းပေါ့။ အာလာကြီး ဆီကအာရုံ
အော် ….တကယ့်ကို သူတော်စင်ကြီးပဲနော် ။
လူသတ်သမား+ဓားမြ + ကျွန်ကုန်သည်+ မုဒိန်းကောင် = တမန်တော်မိုဟာမက်
Then they ( the tribe of Quraiza) surrendered, then he (the Prophet) sent
for them and struck off their heads in those trenches as they were brought
out to him in batches. These were 600 or 700 in all, though some put the
figure as high as 800 or 900 . See p453.4
The women and children were enslaved on the orders of Mohammed.
…” kill the unbelievers ( non-muslims) wherever you find them ” Qur’an 9:5
“Therefore, when ye meet the Unbelievers( non-muslims), smite(cut off) at
their neck ” Qur’an 47:4
၂။ မိုဟာမက်နှင့်သူဧ။် မယားကြီး၊ မယားလတ်၊။မယားငယ်၊ပေါင်း ၆၁ ယောက်
အောက်ပါတရားဝင်အစ္စလာမ်မစ် Official Islamic Books များမှာပါပါတယ် ။
င်္Reference Islamic Books
1.Sahih Al-Bukhan/ 2. Sahih Muslim / 3. The Prophetical life history by ibn
kathir / 4. The Prophetical life history by Ibn Hesham / 5.The Halabin
prophetical life hitory/ 6. The Golden pealries by Al-Masoudy / 7. The Wives
and children of the prophet by Amir Muhna / 8. The Wives of the prophet by
Iman Al-Salhy Al-Demeshky / 9. The wives of the prophet by Al-Waqedy / 10.
The prophet’s women by Bent Al-Shate’ /11. Muhammad the messenger of God by
Muhammad Reda/ 12. Al-Tabakat Al-Kobra by Ibn Saad/
13. The inursions by Ibn Ishak / 14. Other.
မယားစာရင်းလာပါပြီး၊။ (၆၁) ယောက်နော်။
1/ Asma’ Bent Al-Salat 32/Saba Bent Sofyian
2/ Asma’ Bent Al-No’man 33/Zainab Bent Khozimah
3/ Asma’ Bent Ka’b 34/ Slahma Bent Najdah
4/ Al-Sha Bent Refa’h 35/ Sana’ Bent Al-Salt
5/ Al-Sharba’ Bent Omer 36/ Sowda Al-Korashya
6/ Al-Alia’ Bent Dhoubian 37/ Sowda Bent Zama’
7/ Om Habba Bent Abe Solyian 38/ Sharafa Bent Khalyfa
8/Om Haram 39/ Safya Bent Hoyai
9/ Om Saima Al Makhzomya 40/ Dida’h Bent Amer
10/ Om Shriek Bent Ghazia 41/Diba’f Bent Jamdab
11/ Om Striek Al-Dosys 42/ Aisha Bent Abe Baker
12/ Om Shriek Al-Ansarya 43/ Aza Bent Abe Sofyian
13/ Om Shriek Al-Karashya Al-Ameray 44/Omra Al-Ghafarya
14/ Om Shriek Bent Jabber Al-Ghafarya 45/Omra Al-kalabeya
15/ Om Hany Bent Abe-Taleb 46/Omra Bent Mo’arway
16/ Omayma bent Al-No’man 47/ Omra Bent Yazied Ben Rawas
17/ Omayma Bent Sharahyl 48/ Ghaziah Bent Oaf
18/ Bent Gandab 49/ Al-Fatah Al-Fazawya
19/ Jarya’t Zainab Bent Jahsh 50/ Fatima Bent Sarij
20/ Jamra Al-Maznya 51/Fatima Bent Al-Dahak
21/ Jamra Bent Al-Hanth 52/ Quadla Bent Quies
22/Jone Bent Al-Hanth 53/ Kanadia Bent Al-No’man
23/ Habiba Bent Sahl 54/ Leyia Bent Al-Khodaiem
24/ Hafsa Bent Omer Bin Al-Khatab 55/ Leyia Bent Hakim Al-Ansarya
25/ Khadja Bent Khoiled 56/ Maria the Coptic
26/ Khawiah Bent Al-Hazei 57/ Malkia Bent Ka’b
27/ Khawfah Bent Hakim (his aunt) 58/ Maymouna Bent Al-Hanith
28/ Khawiah Bent Sahi 59/ Na’ama
29/ Rayhan Bent Zaied Al-Karazia 60/ Habia Bent Quies
30/ Zelikha Al_Quraza 61/ Hend Al-Makhzomya
31/ Zainab Bent Jahsh
ညောင်းလိုက်တာဗျာ။ ဒီတဏှာရူးကြီး မိုဟာမက်အကြောင်းရေးရတာ….ဟူး…..။
ဒီမယားတွေထဲမှာထူးခြားတာက 42/ Aisha Bent Abe Baker ဆိုတဲ့ ကလေးငယ်လေးကို
၉နှစ်အရွယ်( ၃တန်းအရွယ်) မှာ အသက်၅၄နှစ်အရွယ်
မြင်ယောင်ကြည့်ပါ ။ အသက်၅၄နှစ်အရွယ်သေခါနီးကြီး ကာမဘီလူးတဏှာရူးကြီး မိုဟာမက် က
မိုဟာမက်ကြီးကသူ့အဒေါ်အရင်း 27/ Khawfah Bent Hakim (his aunt) နဲ
ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ မွတ်ဆလင်တွေကိုပြောလိုက်။ ၉ နှစ်အရွယ်မင်းတို
စိတ်မဆိုးနဲ့နော်။ ဒါမင်းတို့ တမန်တောကြီး လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအတိအကျပြောပြတာ
လူ့သမိုင်းမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးသူတော်ဇင်ကြီးရဲ့ အကြောင်းကို ခင်ဗျားတို့
တို့ မိုဟာမက်ကြီးတောင်ဒီလိုလုပ်သေးတာပဲဆိုပြီး ။
မယားတွေအများကြီးယူ။ကလေးသူငယ်တွေကိုမုဒိန်းကျင့် Women Abuse, Child Abuse,
တွေဟာယနေ့ အစ္စလာမ်အမျိုးသမီးငယ်ပေါင်းများစွာ ခံစားနေရတဲ့ပြဿနာ ပါပဲ။
မွတ်ဆလင်ကောင်တစ်ကောင်က တရားဝင်မိန်းမ ၄ယောက်
ယူခွင့်ရှိပေမဲ့ ။ မိန်းမတစ်ယောက်ကတော့ ဖောက်ပြန်တယ်
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ သူတပါးသားမယားကိုပြစ်မှားတဲ့သူဟာ Gay ဖြစ်ပြီး
ငရဲအိုးဇောက်ထိုးကျပါတယ်။ ဒု-သ-န-သော ဆိုတာကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။
လူ့ဘ၀မှာဒီလောက် သူတပါး သားပျိုသမီးပျိုတွေဖျက်ဆီးခဲ့တာတောင်အားမရသေးဘဲ
မိုဟာမက်ကြီးဟာ သေပြီးတာတောင်ကောာင်းကင်ဘုံမှာအပျိုစင်၇၂ယောက်နဲ့ ပျော်ပါးနေဦးမယ်ဆိုပဲ…
As to the thief, male or female, cut off his or her hands ..Qur’an 5:38
ဒီလောက်ဆိုရင် မိုဟာမက်ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးဟာ ဘယ်လိုကောင်ကြီးလဲဆိုတာသဘောပေါက်
စစ်တိုက်ရင် အတွင်းစည်းကလည်းတိုက်တယ်။ အပြင်စည်းကလည်းတိုက်တယ်။
Radical muslimsအစွန်းရောက်မွတ်ဆလင်တွေက အပြင်စည်း။
Moderate muslims အလယ်အလတ်မွတ်ဆလင်တွေကအတွင်းစည်း။
The Duty of Radical Islamic Muslims, အစွန်းရောက်မွတ်ဆလင်တွေရဲ့တာဝန်က
ပေါ်တင်သတ်ဖို့ ၊လူများများသေအောင်သတ်ဖို့ ။
The Duty of Moderate muslims ,အလယ်အလတ်မွတ်ဆလင်တွေ ရဲ့ အဓိကတာဝန်က မယား(ကလေးမွေးစက်) တွေအများကြီးယူမယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင်မူလနိုင်ငံက မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့မိန်းမတွေ ၄ယောက်လောက်ယူမယ်။
မယား(၁)ယောက်ကိုကလေး(၅)ယောက်နှုန်းနဲ့ မယား (၄)ယောက်ဆီက မွတ်ဆလင်ကလေး (၄x၅=၂၀) ၁း၂၀နှုန်းနဲ့ ပွားတာ။
စောက်ရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် ။ အခုဥရောပမှာခေါင်းစားနေတာအဲဒီကိစ္စပဲ။
ဘယ်လူမျိုးကမှဒီမွတ်ဆလင်ခွေးသားတွေလို ကလေးကိုတိရိစ္ဆာန်မွေးသလို
ဒီတော့မွတ်ဆလင်တွေ ရဲ့ ကလေးမွေးနှုန်း Child Birth Rate အရ ကြိုက်တဲ့နိူင်ငံ
တစ်ခုကိုလက်နက်မပါပဲ Generations မျိုးဆက် ၃ ဆက်လောက်မှာ မွတ်ဆလင် Majority
အထူးသဖြင့် သိတဲ့အတိုင်းပဲဥရောပနဲ့ US
မှာဆိုရင်တော်ရုံတန်ရုံကလေးမမွေးချင်ကြဘူး ။ တစ်ယောက်၊နှစ်ယောက်လောက်ပဲမွေးပြီး
အောက်တန်းကျကျကြီးပြင်းပါစေ၊ အချိန်တန်လို့ ကလေးတွေကြီးပြင်းလာကြရင်
အများစုဖြစ်တဲ့မွတ်ဆလင် အောက်တန်းစားလေးတွေက ဟို ဥရောပသား
သဘောပေါက်လား။ လူများတရားနိုင်ပဲ ။
အချိန်တန် လို့မွတ်ဆလင် ကလေးတွေအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ
ဒီကောင်တွေ တိရိစ္ဆာန်တွေလို စောက်ရမ်း မွေးနေတာကိုသွားတားဖို့ ကျတော့လည်း
မွတ်ဆလင်ကောင်တွေလုပ်ပုံကရှင်းတယ်နော်။ လန်ဒန်မှာမွေးတယ်။ လန်ဒန် မှာကြီးတယ်။
လန်ဒန်ရေကိုသောက်။ လန်ဒန်မြေမှာကြီးတယ်။ပြီး တော့
လန်ဒန်မှာမွေးမွေး။ ဟောလန်မှာမွေးမွေး။ စပိန်မှာမွေးမွေး၊ မြန်မာမှာမွေးမွေး
လန်ဒန်မှာမွေးတဲ့မွတ်ဆလင်က လန်ဒန်ကိုမွတ်ဆလင်နိုင်ငံဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ ……
ဟော်လန်မှာမွေးတဲ့ မွတ်ဆလင်က ဟောလန် ကိုမွတ်ဆလင်နိုင်ငံဖြစ်အောင်လုပ်ဖို.
စပိန်မှာမွေးတဲ့မွတ်ဆလင်က စပန်ကိုမွတ်ဆလင်နိုင်ငံဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ ….
သူတို့ရဲ့ တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်က တစ်ကမ္ဘာလုံး
All Muslims , Only one Purpose ပဲ။ ie; Islamization
နိုင်ငံတိုင်းကို ဖြည်းဖြည်း နဲ့မသိလိုက်၊မသိဘာသာ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံဖြစ်သွားအောင်
၂၀၂၅ မှာဆိုရင်ဥရောပ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်အားလုံးရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံဟာ
၂၀၆၀ မှာပြင်သစ်နိုင်ငံ ရဲ့ လူဦးရေရဲ့ ၅၀%
ကဲဒါက အ တွင်းစည်း ……အကြမ်းမဖက်၊ သေနတ်တစ်ချက်မဖေါက်ပဲ
ဘယ်သူကပြောင်းရဲမှာလဲ။ One Way ပဲရှိတယ် ။
ညောင်စေ့လေးက သစ်ပင်ကြီးကို မ၀ါးနိုင်ပါဘူးလို့ ထင်နေရင်းနဲ့ပဲ
မြန်မာနိုင်ငံဟာလောလောဆယ် ဥရောပနိုင်ငံ တွေလောက် Islamization
သူတော်ကောင်းတွေအုပ်ချုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လို့ ဆိုပြီးတော့
အဖြေမှန်က မြန်မာနိုင်ငံဟာမစားလောက်သေးဘူး ၊။ ဘယ်အ ချိ်န် ၀ါးဝါး ရလို
ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတာပြောပြမယ်။ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ Fighter Key Player Super Power
Nations နိုင်ငံ တွေက USA နဲ့ England ပဲ ။
USA နဲ့ England ဟာSuper Power Nations တွေပဲ ။ USA နဲ့ England ကျ
ရှုံးသွားရင် ( မွတ်ဆလင်နိင်ငံဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရင် )
ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးကိုစောက်ချဉ် ဖြစ်သွားပြီ ။
ှSuper Power နိုင်ငံ (၂) ခုဖြစ်တဲ့ USA နဲ့ England ကို
မွတ်ဆလင်နိင်ငံဖြစ်အောင်လုပ် ပြီးသွားရင် တကမ္ဘာလုံးမှာ
FIghter က သူတို့ နှစ်နိုင်ငံပဲရှိတာလေ ။ USA နဲ့ England ကျ ရှုံးသွား မှတော့
NUKE လက်နက်ရှိ တဲ့ USA နဲ့ England ကို မွတ်ဆလင်နိင်ငံဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်
မှတော့ ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံး ခွေးဖြစ်ပြီပေါ့။
ဒါကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာ Fighters တွေဖြစ်တဲ့ ဥရောပနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံတွေကို
သေနတ်တစ်ချက်ဖေါက်စရာမလိုဘူးနော်။ American မတွေကို ရနိုင် သမျှယူ။
မွတ်ဆလင်ကလေးတွေအဆမတန်မွေးပြီး Generations မျိုးဆက် ၃၊၄၊ ခုလောက်မှာ
ဥရောပနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံတွေ ဟာမွတ်ဆလင်နိုင် ငံတွေဖြစ်သွားမှတော့ ကျန် မဖွ
ံ့ ဖြိုးသေးတဲ့တတိယနိုင်ငံတွေ က ဘာလုပ်နိုင်တော့မှာလဲ။
FIghter ဘယ်သူကျန်တော့လဲ။ နားလည်လား။ရှင်းပြနေတာ ။
ရေသေက်မြစ်ကိုအဓီက ဖျက်ဆီးမှာပေါ့။ ဟုတ်တယ်နော်။
ရေသောက်မြစ် ကြီး တွေ ပျက်ဆီးမှတော့အကိုင်းအနားတွေဟာ သူ့ အလိုလို သွားပြီပေါ့။
ဒါကြောင့်ဥရောပနဲ့ America ကို မွတ်ဆလင်တွေဖြစ်အေ
ကောင်းတယ်ဗျာ...မွတ်တွေ အကြောင်းသိရတာ... ဘင်္ဂါလီတွေ အမြစ်ပြုတ်ပီးရင် တော့ ပြည်တွင်းက မြန်မွတ်တွေကို ဖြုတ်ဖို့ ရှိသေးတယ်
zaw zaw June 12, 2012 at 1:57 AM
အစိုးရရဲ့ ကိုင်တွယ်ပုံနူးညံ့ဖို့ လိုပေမဲ့ပျော့ညံ့ဖို့ မလိုဘူး။ဒို့ သွေးချင်းတွေကိုကာကွယ်ကြပါစို့ ။
kyi kyi June 12, 2012 at 11:37 AM
တခုတို့ ပြေပါရစေ ကုလားဆိုတာ ဘယ်ကုလားမှ ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး၊ အစကတို့ ရခိုင်တွေဘဲ ဆိုးသလိုနှင့် ဘယ်သူတွေက အရင်စပြီးမိုက်ရိုင်းတာလည်း အခုတို့သိကျပီမဟုတ်လား
နောက်တခု ပြောချင်တာက အခုအရေးက ရခိုင်နှင့် ကုလားအရေး မကတို့ဘူး နိုင်ငံတော်နှင့်ကို ပါတ်သက်လာပီး ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ကုလားကသိမ်းချင်နေတာကြာပီလေ ဒါကို မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းက သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်
နောက်တခုက ရန်ကုန်ကုလားဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ကုလားက ဘယ်မှာဘဲနေနေ ကုလားက ကုလားဘဲ ဒါကိုတို့ သိချင်ပါတယ်
တက္ကသိုလ် အလင်းအိမ်(တေဇာလင်း) June 12, 2012 at 9:02 PM
အဖြစ်အပျက်တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အရင်းစစ်တော့ အမြစ်မြင်ဆိုသလို...ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားတွေ နေထိုင်ရာ ဒေသမှာ အယူဆမတူ..စိတ်ဓါတ်မတူ...အတွေး အခေါ်မတူတဲ့ အခြား လူမျိုးတစ်မျိုးကို အကြောင်း အမျိုးမျိုးနဲ့ လက်ခံခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေက တရားခံလို့ပြောရမှာပဲ...ခုကိစ္စဟာ သင်္ခန်းစာပေးသွားပါပြီ...သူတို့တွေ ဒီလောက်ကလေးနဲ့ ဒီလို မြန်မာနိုင်ငံကို လုပ်ချင်သလို လုပ်သွားရင် နောင် ဒီထက် ကြီးထွားသွားကြရင် ဒီထက် ဆိုးတဲ့ ရင်နာစရာတွေ တွေ့ရတော့မှာပါ...အဲဒိအခါတွေမှာလဲ...ခုလိုပဲ သည်းခံလိုက်ကြပါ..သည်းခံခြင်းဟာ မြတ်ပါတယ်...လို့ပဲ အဆုံးသတ်နိုင်မလားဆိုတာ မပြောနိုင်တော့ပါဘူး...အဲဒိတော့ ဆောင်းပါးရှင်ပြောသလို...ကိုယ့်တိုင်းရင်သား မဟတ်တဲ့ ဒီလူမျိုးတွေကို ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေပေါ်မှာ လုံးဝ လက်ခံထားလို့ မရတော့ပါဘူး...။ ပထမဖြစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ ရခိုင် အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို မတော် မတရားပြုတဲ့ အပြင် အားနွဲ့ရှာတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ဦးကို သတ်ဖြတ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို သည်းခံခိုင်းဘို့ဆိုတာ တော်တော်ခက်ပါလိမ့်မယ်...အဲလို စော်ကားတာဟာ မတော်တဆ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာလူမျိုး မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီတော့ ဒုတိယ ဖြစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ လူမျိုးရေး သတ်ဖြတ်မှုဟာ မကောင်းတာမှန်ပေမယ့် အလွန်ရိုင်းဆိုင်းကြမ်းတဲ့ ပထမဖြစ်ရပ်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား တိုင်းရင်းသားများ ကျေနပ်လောက်တဲ့ အရေးယူမှု နောက်ကျလို့ ဒုတိယ ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့ရတာ...အဲဒိဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးကို သာမာန်ဒုစရိုက်မှုလို့ သတ်မှတ်လို့ရပါသေးတယ်...ထိုက်တန်တဲ့ ဥပဒေ နဲ့ အပြစ်ပေးလို့ ရပါတယ်...တတိယ ဖြစ်ရပ်ကတော့ လုံးဝ လက်ခံလို့ မရတဲ့ ဖြစ်ရပ်ပါ...ဒါဟာ နိုင်ငံရေး အရ၊ လူမျိုးရေး အရ ၊ ဘာသာရေး အရ (ဘာသာရေး မပါဘူးပြောရင်...ခု သောင်းကျန်းသူတွေထဲမှာ မူစလင်မှ လွဲပြီး အခြား ဘာသာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ပါတာများ တွေ့ကြပါသလား)ကျူးကျော်စော်ကားမှုပါ...ဘာကြောင့် ပြတ်ပြတ်သားသား အရေး မယူနိုင်ရမှာပါလဲ...ပြည်တွင်းက ကိုယ့်တိုင်းရင်သားတွေ ၊ သံဃာတော်တွေ လက်နှက်မဲ့ ဆန္ဒပြစဉ်က ပြတ်ပြတ်သားသား အရေးယူခဲ့တဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ တိုင်းတပါးသားတွေ ဒီလို အဘက်ဘက်က စော်ကားလာတာကိုတော့ ဘာကြောင့်များ ပြတ်ပြတ်သားသား အရေးမယူနိုင်၇တာလဲ..ဆိုတာတော့အံ့သြစရာပါ....။
ဒီအကြောင်းတွေကိုတခြားသူငယ်ချင်းတွေလည်းသိအောင် ရှယ်ပေးချင်တာ ဘယ်လိုရှယ်ရမလဲမသိဘူး
kyawhtun June 15, 2012 at 7:01 PM
"ကိုယ်.အမျိုးကိုချစ်ရုံနဲ. ဒီ.ပြင်အမျိုးကိုလည်းမုန်းဖို.မလိုဘူး။ သို.သော်လည်း မိမိအမျိုးကိုလာထိတဲ.သူတွေကိုတော. အတွင်းကလူဖြစ်ဖြစ်အပြင်ကလူဖြစ်ဖြစ် တိုက်ခိုက်နှိမ်နင်းရမှာပေါ.။ ဒါက ငါတို.အမျိုးရဲ.ရန်သူအဖြစ်ဖြင်.သာ နှိမ်နှင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ ဘယ်လူမျိုးဘယ်သူ ...
kyawhtun June 15, 2012 at 7:04 PM
"ကိုယ်.အမျိုးကိုချစ်ရုံနဲ. ဒီ.ပြင်အမျိုးကိုလည်းမုန်းဖို.မလိုဘူး။ သို.သော်လည်း မိမိအမျိုးကိုလာထိတဲ.သူတွေကိုတော. အတွင်းကလူဖြစ်ဖြစ်အပြင်ကလူဖြစ်ဖြစ် တိုက်ခိုက်နှိမ်နင်းရမှာပေါ.။ ဒါက ငါတို.အမျိုးရဲ.ရန်သူအဖြစ်ဖြင်.သာ နှိမ်နှင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ ဘယ်လူမျိုးဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုပြီး နှိမ်နှင်းတာမဟုတ်ဘူး။
kyawhtun June 15, 2012 at 7:06 PM
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ. ဆိုမိန်.တွေကတော. အရမ်းကိုလေးနက်တန်ဖိုးရှိပါလားဗျာ။
မွတ်စလင် အားလုံး မျိုးပြုတ်မှ ပဲ ကမ်ဘာကြီးအေးချမ်းမယ်။ဒီကောင်တွေပဲပြသနာ မီးထွန်းရှာနေတာ။ခွေးသား ၀က်မြေးတွေ။
ရိုဟင်ဂျာလို့ မသုံးနှုန်းကြပါနဲ့ ။တရားဝင်အသိမှတ်ပြုသလိုဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒါကိုအငြင်းပွားနေရတဲ့အထဲကတစ်ခုပါ။
အမေစုဘင်္ဂါလီတွေဆီကမဲမရမှာမပူနဲ့ ။အမေစုလိုသလောက်မဲကို ရခိုင်တွေထည့်ပေးမယ်။
ရိုဟင်ဂျာလိ့ သုံးတဲ့အသုံးနှုန်းကိုခါးခါးသီးသီးကန့် ကွတ်တယ်။ဘင်္ဂါလီလို့ သုံးကြပါ။ကိုသတ်တန့် ဆက်လုပ်ဗျာ
Anonymous August 11, 2012 at 4:14 PM
ဆက်အားပေးနေတယ်ဗျာ ဆက်ရေး အယူမတူမကြည်ညိုဘူးတဲ့ အယူအဆ